Daxalka biraha aan xarka lahayn iyo soo saaraha cuskado | Jiannuo
Qalabka jiannuo wuxuu heli doonaa macaamiil badan oo gasacayaal iyo qadarin leh tayo wanaagsan
Shirkad xirfadle ah oo dhex-galaya cilmi-baaris iyo horumar, naqshad, wax soo saar, rakibaadda, inta badan, kumbuyuutarrada, qalabka musqusha, xarkaha darbiga, iyo qalabka la xiriira. , Birta birta iyo wax soo saarka kale ee mashruucyada.
Qalabka Jiannuo wuxuu sameeyay xoog farsamo oo xoog leh oo ay hogaamiso injineerada sare, naqshadeeyayaasha iyo shaqaalaha farsamada ee xirfadleyda ah. Waxay soo saartay qalab wax soo saarka shisheeye ee horumarsan, iyo badeecadooda waxaa lagu soo saaray si waafaqsan hababka farsamada ee heerarka ah.
Waxay ujeeddadeedu tahay inay siiso macaamiisha tayo sare leh, wax ku ool ah, sheeko cusub iyo muuqaal qaas ah oo birta birta ah ee birta birta iyo birta birta ah ee birta ah. Isla mar ahaantaana, qalabka Jannuo ayaa si joogto ah u koraya teknolojiyad cusub, hanaanno cusub, iyo alaabo cusub oo ku habboon qalabka qalabka casriga ah si loo waafajiyo horumarka suuqa.
Sii macaamiisha tayo sare leh, wax ku ool ah, sheeko iyo alaabooyin u gaar ah oo ah birta birta birta ah iyo birta birta aan birta lahayn. Isla mar ahaantaana, qalabka Jannuo ayaa si joogto ah u koraya teknolojiyad cusub, hanaanno cusub, iyo alaabo cusub oo ku habboon qalabka qalabka casriga ah si loo waafajiyo horumarka suuqa.
Qalabka Jannuo wuxuu heli doonaa macaamiil badan oo gasacayaal iyo qadarin leh tayo wanaagsan.
Macaamiil marka hore, dammaanadda tayada, abuuro badeecooyin tayo sare leh oo cusub.
Waqtigan xaadirka ah, Jiannuo wuxuu sameeyay mid kacsan oo iibiya iyo shabakad adeeg iibiya kadib wuxuuna aasaasay muuqaal wanaagsan oo shirkadeed, kaas oo ay u mahadnaqeen macaamiisheena.
Waxaan aaminsanahay in sida ku xusan fikradda adeegga ee "macaamiisha marka hore", marka hore in lagu qalabeeyo oo lagu qiimeeyo macaamiil badan oo ka badan guriga iyo dibedda, oo ay sii wadi doonaan horumarinta. Alaabooyinkeenna ugu muhiimsan waa birta birta oo aan cillad lahayn iyo gacmayaasha gacanta.